ဒလံသူ့ကားသူမီးပြန်ရှို့တယ်ဆိုပြီးပြောနေကြတဲ့ သူတွေကို ပေါက်ကွဲစွာနဲ့ ပြန်လည်တုန့်ပြန်လိုက်တဲ့ အဆိုတော်ယုန်လေး – Cele Top Stars
ဒလံသူ့ကားသူမီးပြန်ရှို့တယ်ဆိုပြီးပြောနေကြတဲ့ သူတွေကို ပေါက်ကွဲစွာနဲ့ ပြန်လည်တုန့်ပြန်လိုက်တဲ့ အဆိုတော်ယုန်လေး
April 21, 2021 By admin2Knowledge
ပရိတ်သတ်ကြီးရေ.. အဆိုတော်ယုန်လးဟာဆိုရင် တေးသီချင်းများစွာကို သီဆိုခဲ့တဲ့အဆိုတော်တစ်ဦးပဲဖြစ်ပါတယ် ပရိတ်သတ်ကြီးရေ..။ယုန်လေးဟာဆိုရင် စစ်တပ်မှကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ သင်္ကြန်ပွဲတော်မှာသွားရောက်ဖျော်ဖြေခဲ့တဲ့ အတွက် ပရိတ်သတ်တွေ အကြီးအကျယ်ပေါက်ကွဲပြီး ဒေါသထွက်သည်အထိ ယုန်လေးကို စိတ်ဆိုးနေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်…။
ပီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်မှာလည်း ယုန်လေးရဲ့ကားကိုမီးရှို့ခြင်းခံခဲ့ရပါတယ် ။အဲ့ဒီအဖြစ်အပျက်နဲ့ပတ်သက်ပီး ယုန်လေးက အခုလိုပဲပေါက်ကွဲစွာနဲ့ပြန်လည်တုန့်ပြန်လာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ် ပရိတ်သတ်ကြီးရေ..။ ယုန်လေးက ” အခု မှ လိုင်းရတဲ့ နေရာရောက်လို့ပါ ဒလံ ဆိုတဲ့ စကားအဓိပ္ပါယ်ကို သေချာ နားလည်နိုင်ပါစေ . အရင်ထဲက မကျေနပ်တာတွေ နဲ့ ရော ပြီး ဒလံ ဆိုတာနဲ့ မရောထွေးပြစ်ပါနဲ့ .
ဒီနေ့ ဒီချိန်ထိ သူတပါးကို ဒုက္ခရောက် အောင် မလုပ်ဖူးပါဘူး .ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ လူတွေကိုသာ သူတို့ ဒုက္ခတွေကို ဖြေရှင်းပေးခဲ့တာပါ .ကျွန်တော် ကူညီပေးခဲ့တဲ့ လူတွေပါအဖြေတစ်ခု ဖြစ်စဉ်ကို သေချာ မသိပဲ ဆဲနေတာတွေ မြင်တော့ စိတ်မကောင်းပါဘူး .ဒီလောက်ပါပဲ . ကလဲ့စားချေတယ်ဆိုတာ ဘဝ မှာမရှိခဲ့ဘူးပါ . နောက်လည်း မရှိပါ .အရင်ထဲကလည်း ကူတယ် ကယ်တယ် ဒီ အလုပ်ပဲ လုပ်နေတာ အခုလည်း ကူတယ်ကယ်တယ် . ဒါပဲ လုပ်တာပါ .အနုပညာ သမားတွေ နဲ့ ပက်သက်ပြီး နောက် Post တင်ပါမယ် .
ကားကိစ္စပြောချင်ပါတယ် .အာမခံ မထားထားတဲ့ အမှားက အဆိုးထဲက အကောင်းဖြစ်လာတယ် .ဆုံးရူံးတာ ကျွန်တော်ပါ .ကျွန်တော် ကိုယ့်ကားကို ကိုယ်တိုင်ရိူ့တယ် လို့ထပ်စွတ်စွဲတယ် . သိန်း ၂၀၀ နဲ့ ပေါင်ထားတယ် ထပ်ပြောတယ် .လူတွေ အကုသိုလ် နဲ့ စိတ်ဓာတ်တွေ အခြေနေတွေတော်တော်ဆိုးသွားပြီကျွန်တော် OG2က ရတဲ့ ရုံဝင်ကြေးနဲ့ ဝယ်ထားတဲ့ ကား ဘဝ ပြန်စတဲ့ အချိန် ပြန်ဝယ်နိုင်တဲ့ ကား ကျွန်တော်တန်ဖိုး ထားတဲ့ ကား ဘယ်လောက် ပေးပေးမရောင်းဘူး .ကျွန်တော် ပြန်ရိူ့ပါ့ မလား .
သိန်း ၂၀၀ နဲ့ ပေါင်ပြီး အပေါင်ဆုံးချင်တယ်လို့ ပြောရအောင်လည်း သိန်း ၂၀၀ မက တန်ပါတယ် .မီးရို့ စရာရောလိုလိုလား . ကျွန်တော် အနုပညာ သမားပါ . ကျွန်တော် ကို Show ဌားလို့ဆိုတယ် .ပြီးတော့ ကိုယ့်လူတွေကို ကူကယ်တဲ့ ကိစ္စတွေ လုပ်နေလို့ ဆိုပါတယ် . ဒါပါပဲ . ဝဠ်ကြွေး များရှိခဲ့ရင် ဒီ ဘဝ ဒီမှာတင်ကြေပါစေ.ကိုယ်စိတ်ကိုယ်သန့်တယ် .ကိုယ်စေတနာ ကိုယ် အကျိုးပေး မယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ် .” ဆိုပြီး သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာမှာရေးသားထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်…။ဖတ်ရှုပေးတဲ့ ပရိတ်သတ်တစ်ယောက်ချင်းစီတိုင်းကို အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်…။
Source ; Yone Lay’s Facebook acc
ုူုဒလံသူ့ကားသူမီးပြန်ရှို့တယ်ဆိုပြီးပြောနေကြတဲ့ သူတွေကို ပေါက်ကွဲစွာနဲ့ ပြန်လည်တုန့်ပြန်လိုက်တဲ့ အဆိုတော်ယုန်လေး
သူမကို ဖမ်းမိပြီရင် မတော်မတရားပြုကျင့်ပြစ်မယ်လို့ ခြိမ်းခြောက်စာပို့တာကိုခံနေရ တဲ့သရုပ်ဆောင် မေပန်းချီ